Varotra ambongadiny tsara indrindra 7 Custom Custom Cheap Cheap Inflatable Rubber Manufacturer sy Factory | Tianda
Ambongadiny Size 7 Custom ivelan'ny trano mora karibonetra Karibola tsy azo avela
Fonosana: Opp Bag
Fanontana: Fanontana hafanana
Anaran'ny marika Tianda
Laharana maodely BR2826
Fitaovana baolina RUBBER, RUBBER
Loko Loko manokana
Famantarana Logo an'ny mpanjifa
Fonosana Opp Bag
pirinty natao tamin'ny Fanontana hafanana
Fampiasana Filalaovana arabe ivelan'ny trano
fifaninanana Lalao Olaimpika amin'ny fahavaratra
Habetsahana (sombin-javatra) 1 - 500 501 - 3000 3001 - 10000 > 10000
Est. Fotoana (andro) 15 25 30 Hifampiraharahana
Fampiasana Ho an'ny fampiroboroboana sy lalao an-dalambe
Size 1 # 3 # 5 # 6 # 7 #
Lanja 600-650g (Size 7), 510-560g (Size 6), 480-500g (Size5),, 90-100g (Size1)
Boribory 68-71cm (Size 5), 64-66cm (Size 4), 57-59cm (Size3), 45-47cm (Size2), 40-42cm (Size1)
Panel Takelaka 8
tatavia Tatavia butil naratra
Andininy fonosana 50pcs / ctn, 55 * 53 * 31cm (Size7)
100pcs / ctn, 43 * 35 * 38cm (Size1)
Matetika izahay manome anao ny mety indrindra ny orinasan'ny mpividy indrindra sy ny endrika isan-karazany sy ny endrika misy fitaovana tsara indrindra. Ireo ezaka ireo dia misy ny fisian'ny volavola namboarina miaraka amin'ny hafainganam-pandeha sy ny fandefasana ho an'ny Factory Supply China Export ho any Eropa Sporting Market, milina avo lenta nohajaina Soccer amidy, Football Supply China Inflatable Football ary Training Football Football, Noho ny fiovan'ny fironana amin'ity sehatra ity, dia tafiditra ao izahay ny tenantsika ho varotra varotra miaraka amin'ny ezaka feno fanoloran-tena sy ny fahaiza-mitantana. Izahay dia mitazona fandaharam-potoana fanaterana ara-potoana, endrika vaovao, kalitao ary mangarahara ho an'ny mpanjifanay. Ny moto dia ny manome vahaolana kalitao ao anatin'ny fotoana voatondro.
Ny kalitaon'ny vidin'ny baolina kitra baolina kitra farany ambony sy ny baolina kitra, ny orinasanay dia miasa amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny "fahamarinana mifototra, ny fiaraha-miasa noforonina, ny olona mifantoka, ny fiaraha-miasa mandresy". Ny kilasy fiofanana ho an'ny baolina kitra any Shina ambony sy vidin'ny baolina kitra tsy azo ovaina, manome ny vokatra sy vahaolana tsara indrindra, ny serivisy tonga lafatra indrindra miaraka amin'ny vidiny mirary indrindra dia ny lalànay. Raisinay koa ny kaomandy OEM sy ODM. Natokana hifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina tsara, vonona foana izahay hiresaka momba ny zavatra takinao sy hiantohana ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa. Raisinay tsara ireo namana tonga hifampiraharaha sy hanomboka fiaraha-miasa.
1. Azonao ampiana ny LOGO an'ny mpanjifanao amin'ny vokatrao?
2. Inona avy ireo famaritana ara-teknika ny vokatrao? Raha eny dia inona ny pitsopitsony?
Araka ny fanamboarana mari-pahaizana fanamarinana rafitra manara-penitra nasionaly
3. Azonao fantarina ve ny vokatrao?
4. Inona ny drafitry ny orinasanao amin'ny famoahana vokatra vaovao?
Hatsarao hatrany hatrany araka ny takian'ny mpanjifa
5. Manefa sarany bobongolo ve ny orinasanao? Ohatrinona? Azoko averina ve? Ahoana ny famerenana azy?
Tsy misy sarany famolavolana
6. Inona ireo fanamarinana efa nolalovan'ny orinasanao?
Mampihatra ny fenitra iraisam-pirenena ny orinasa, nandalo ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001, nametraka sehatra fampiroboroboana fampandrenesana lavorary kokoa, ary rafitra rafitra fitantanana siantifika sy rafitra fiasa, mamorona endrika feno, famokarana, rafitra fivarotana.
7. Misy fatra ambany indrindra amin'ny vokatrao ve? Raha eny dia inona ny habetsany farany ambany?
Teo aloha: Mpivarotra basikety vita amin'ny pirinty vita amin'ny pirinty vita pirinty ambony
Mpivarotra varotra ambony vita amin'ny paosotra vita pirinty vita amin'ny pirinty vita amin'ny pirinty vita amin'ny pirinty vita amin'ny pirinty vita amin'ny ...
Baolina kofehy namboarina tànana 5